समाचार - Pahilo Online
मासियो टीएमजे क्षेत्रको पदमार्ग
तेह्रथुम, २२ फागुन । एकै स्थानमा २८ प्रजातिका गुराँस फुल्ने तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण गरिएपछि पदमार्ग प्रभावित भएको छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको गुफाबजार हुँदै ताप्लेजुङको दोभानसम्मको पदमार्ग मासेर सडक निर्माण गरिएको छ...
खानेपानी आयोजना निर्माण
धरान, २२ फागुन । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुनसरीको बराह नगरपालिका अन्तर्गत महेन्द्रनगर साना सहरी खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो क्षेत्रका ४ हजारभन्दा बढी उपभोक्ताहरूलाई शुद्ध खाने पानी सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । २०७२ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको...
अपहरणकारी पक्राउ, अपहरितको अवस्था अज्ञात
इटहरी, २२ फागुन । अपहरण कार्यमा संलग्न रहेको आशंकामा सुनसरीबाट ५ जना पक्राउ परेपनि अपहरित युवतीको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका १ घर भएकी १९ वर्षीया मण्डल थरकी युवतीलाई जबरजस्ती मोटरसाइकलमा हालेर वेपत्ता पारेको उजुरीका आधारमा...
विराटनगर, २२ फागुन । स्कुल बसको ठक्करबाट विराटनगर–५, स्थित भित्री सडकखण्डमा सोमबार बेलुका एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । एभरेष्ट बोर्डिङ स्कूलको को १ क ८३७ नम्बरको बसको ठक्करबाट सोही स्थानबस्ने ५० वर्षीया शारदा मण्डलको मृत्यु भएको हो । बसको...
श्रीमतिको हत्या गर्ने पक्राउ
पाँचथर, २२ फागुन।अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेका पाँचथरको फिदिमका एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतिको हत्या गरी जमिनमुनी पुरेको खुलासा भएको छ । फिदिम नगरपालिका–३, सिलौटीका ४२ वर्षीया गंगामाया सुनुवारलाई उनकै श्रीमान् ६१ वर्षीय डिकबहादुर सुनुवारले हत्या गरेर जमिनमुनि गाडेको अवस्थामा शव...
क्यान्सरको जोखिम घटाउने खानेकुरा
दूषित पर्यावरण र खानपानलगायत कारणले क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । क्यान्सरको जोखिम कम गर्न के खानुपर्छ ? ब्रोकाउली काउली परिवारका सबै तरकारीमा क्यान्सरनिरोधी गुण बढी पाइने गरे पनि ब्रोकाउलीमा यसको मात्रा सबैभन्दा उच्च हुन्छ । ब्रोकाउलीमा सल्फोराफेनको मात्रा...
अब्बासी र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहीद खकान अब्बासी र नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । अब्बासी बस्नुभएको होटेल हायातमा आज बिहान नेपाल र पाकिस्तानबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा उहाँहरुबीच छलफल भएको हो । भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई...
शहीद भूमिलाई तलब दिने मन्त्रीको घोषणा
इटहरी । एक नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले आफ्नो पहिलो तलब शहीद भूमिलाई अर्पण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन सुनसरीको इटहरी १९ हाँसपोसा स्थित शहीद स्मृति उच्च माविमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्री...
‘हामी जस्तालाई हेला नगर’
इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएर ह्वील चियरको सहारामा जीवन बिताइरहेका राजन बराइली (रमेश)ले घाइतेलाई हेला नगर्न सुझाव दिए । उनै बराइलीलाई आर्थिक सहयोग गर्न नेपाल जनप्रगतिशील मञ्च क्षेत्रीय समिति अवधावी युएइले गरेको कार्यक्रममा...
ट्राफिक समस्या हटाउन निर्वाचन कार्यालयको चासो
विराटनगर । कुनैपनि कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम गर्ने गर्दछ । कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो काम इमान्दारिताको साथ गर्न पनि अल्छी गर्ने संकार रहेकोले उनीहरुबाट सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अतिरिक्त चासो राखेको पाइन्न । तर, विराटनगरको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय र कार्यालका प्रमुख प्रेमप्रसाद...
Previous 1 … 351 352 353 … 364 Next